Iindaba-Uyenza njani iBhokisi enomtsalane
Uyila njani iBhokisi enomtsalane
Ukupakisha kukhona njengokukhusela imveliso yangaphakathi, nangona kunjalo, ngophuhliso loqoqosho lwehlabathi, ukupakisha kufuneka kongeze ixabiso elongezelelekileyo. Ukuma kwindawo yabathengi yanamhlanje, kuya kufuneka ufikelele kwi "wow factor", eyenza uyilo lokupakisha lubaluleke kakhulu.
Kodwa uyila njani ibhokisi yokupakisha enomtsalane?
Kuqala, kufuneka sifumanise ukuba ufuna ukubonisa ntoni, eyona nto iphambili kwimveliso yakho. Yintoni inzuzo yakho xa ithelekiswa nemveliso efanayo kwintengiso. Emva koko uyazi ukuba ufuna ukubukeka njani.
Okwesibini, kufuneka ucace ukuba ngubani abaphulaphuli bakho? Ukuba ngamantombazana amancinci, oko kuyila uyilo lupholile kwaye lucacile. Ukuba yindoda esele ikhulile enempumelelo, ke yenza ukuba uyilo lucoceke kodwa lube mhle.
Emva koko unokukhetha imilo yebhokisi, izinto kunye nemisebenzi yezandla. Oku kuhamba kwindawo yengcali. Unokufumana iqela lakho loyilo lokwenza, okanye usinike umbono ngokubanzi / umxholo, sinokunceda nabanye.